अविवाहित युवतीमा दूध चुहिने समस्या किन हुन्छ? समाधान सहित हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > अविवाहित युवतीमा दूध चुहिने समस्या किन हुन्छ? समाधान सहित हेर्नुस्
admin July 28, 2020 जीवनशैली, याैनशिक्षा, रोचक	0
केहि समयअघि राजधानीको एक कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययनरत २१ वर्षीया युवतीले कक्षामा पढिरहेको समयमा अनौठो अनुभूति गरिन् । अचानक छाति चिसो भएर आयो । तत्काल त्यति वास्ता गरिनन् । तर छाति भिज्ने क्रम बढ्दै थियो । घरमा आएर हेर्दा स्त’नबाट दूध चुहिएको थियो । सुरुमा अनौठो लागेपनि यसलाई उनले गम्भीर रुपमा लिइनन् । तर अविवाहित उनमा यो समस्या बारम्बार दोहोरिने गर्न थालेपछि उनी निकै त’नावमा परिन् ।
र एक साथीको सुझावअनुसार चिकित्सककहाँ पुगिन् । खासमा उनमा यो समस्या प्रोल्याक्टिन ह’र्मोनका कारणले भएको रहेछ ।
के हो स्त’नबाट दूध चुहिने समस्या? स्त’नपान गर्ने बच्चा नहुँदा वा अविवाहित महिलाको स्त’नबाट दुध चुहिने सम’स्या भइरहेको हुन सक्छ । के कारणले दुध चुस्ने बच्चा नभएको समयमा पनि स्त’नबाट दुध बगिरहन्छ ? यसबारे जानकारी हुनु आवश्यक छ। हाम्रो मस्तिष्कमा पिट्युरी ग्रन्थी हुन्छ । यसबाट प्रोल्याक्टिन हार्मोन उत्पादन हुन्छ । यो हार्मोनको काम स्त’नको विकास गर्ने र बच्चा जन्मिएपछि दूध बनाउने हो । यो हा’र्मोन आवश्यक मात्रामा उत्पादन भइरह्यो भने केही असर पर्दैन ।
खासगरि ग्याष्ट्रिक, साइकाट्रिससम्बन्धी औषधिको प्रयोग, धेरै कसिलो लुगा लगाउँदा या मस्तिष्कमा कुनै चो’ट लागेको भएपनि यो सम’स्या देखिन सक्छ। यस्तो समस्या विश्वका १ प्रतिशत मानिसमा देखिन्छ । बढी महिलामा नै भएको पाइन्छ । समयमा उपचार गरेमा यसको स’मस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । यो धेरै देखिने रोग भने होइन।
यौ’नसम्प’र्क गर्न मन नलाग्ने, अल्छी लाग्ने, महिलामा महि’नावारी अनियमित हुने, घाँटी दुख्ने वा सं’क्रमण हुनेजस्ता लक्षण देखिन सक्छन्। यस्तै, बाँ’झो’पन, हड्डी कमजोर हुने तथा यो’नीमा दुखाई हुनेजस्ता स’मस्या हुन सक्छन् । आँखामा पनि विभिन्न स’मस्या देखिन्छन् । किनकि अप्टिक नली पिट्युरी ग्रन्थीनजिकै हुन्छ । यो ग्रन्थीमा सम’स्या आउनेबित्तिकै अन्य सहायक नलीको विकासमा समेत रोकावट ल्याउन सक्छ । पुरुषहरुमा स्तन बढ्ने पनि हुनसक्छ ।
महिला अधिकारकर्मीको आ’क्रोश ए’सिड आक्रमण गर्नेलाई गो’ली ठोक! (भिडियो सहित)
बुर्का भेषकि युवतीलाई प्रहरीले समातेपछि खुलेको सबै चकित हुने सत्य
पोथीलाई खुशी पार्नकै लागि दु:ख गरेर गुँड बनाउने यी इन्जिनियर चरा… (मनमोहक तस्विरहरू हेर्नुस्)